Nokia ဝယ်မယ်ဆို ဒါလေးတွေ သိပြီးပြီလား - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
Nokia ဝယ်မယ်ဆို ဒါလေးတွေ သိပြီးပြီလား
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်များမှာ Nokia 6, Nokia 5, Nokia3မော်ဒယ်သုံးမျိုးကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Nokia စမတ်ဖုန်းကို ဝယ်ယူတော့မယ် ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ရဲ့ Customer များအတွက် သိထားသင့်တာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ..။
Nokia 6,5,3 မော်ဒယ် သုံးမျိုးစလုံးမှာ မြန်မာဖောင့် ရမလား ?
အခုလက်ရှိမှာတော့ Built-in Unicode ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာဖောင့်အနေနဲ့ Unicode သာ ဖတ်ရှု အသုံးပြုနိုင်အုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ် သုံးမျိုးစလုံး ဇော်ဂျီကုတ် ရရှိဖို့ကတော့ သြဂုတ်လ လောက်ဆိုရင် Nokia က System Update ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကျရင်တော့ အသုံးပြုသူက Data or Wifi နဲ့ Update ပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့် ဝင်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ့အခါမှ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Root ဖောက်စရာ မလိုဘဲနဲ့ Built-in ဆိုတာနဲ့တင် Ok နေပါပြီ။
4G အသုံးပြုလို့ ရသလား ?
Nokia 6, Nokia 5, Nokia3သုံးမျိုးစလုံး 4G အသုံးပြုလို့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ လက်ရှိပြည်တွင်း အော်ပရေတာတွေရဲ့ SIM ကဒ်တွေကို ထည့်စိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး လိုင်းဆွဲအား ကောင်းမွန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Nokia6ကတော့ SIM ကဒ် နှစ်ကဒ် ထည့်စိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nokia5နဲ့ Nokia3ကတော့ SIM ကဒ် တစ်ကဒ်သာ ထည့်စိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားများကတော့ Nokia6ဟာ ၅.၅ လက်မရှိပြီး Nokia5ကတော့ ၅.၂ လက်မ ရှိပါတယ်။ Nokia3ကတော့ ၅ လက်မအတိ ဖြစ်ပါတယ်။ Display အမျိုးအစားကတော့ မော်ဒယ်သုံးမျိုးစလုံးကို IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ကတော့ Nokia6မှာ 1080x1920 pixels (~403 ppi pixel density) ရုပ်ထွက်ကို ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nokia5နဲ့3ကတော့ 720x1280 pixels (~282 ppi pixel density) ကို Nokia5မှာ ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး 720x1280 pixels (~294 ppi pixel density) ရုပ်ထွက်ကို Nokia3မှာ ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nokia6မှာတေ့ာ Display ကို Corning Gorilla Glass3နဲ့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ပါဝင်မှုကလည်း Nokia6မှာဆိုရင် ROM 32GB နဲ့ RAM3GB ပါဝင်ပါတယ်။ Nokia5နဲ့ Nokia3မှာတော့ ROM 16GB နဲ့ RAM 2GB ပါဝင်ပါတယ်။ SD ကဒ် ထပ်စိုက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Nokia6,5,3သုံးမျိုးစလုံးမှာ 256 GB အထိ ထပ်စိုက် အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
OS,Chipset, CPU, GPU
Nokia မော်ဒယ် သုံးမျိုးစလုံးရဲ့ OS ကတော့ Android နောက်ဆုံး version တွေနဲ့ ထွက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Android 7.1.1 (Nougat) ကိုတော့ Nokia6နဲ့ Nokia5မှာ အသုံးပြုပေးထားပြီး Nokia3မှာတော့ 7.0 (Nougat) ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Nokia6မှာတော့ Chipset အနေနဲ့ Qualcomm MSM 8937 Snapdragon 430 ကို အသုံးပြုပေးထားပြီး Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 နဲ့ တွဲဖက်မောင်းနှင်ပေးထားပါတယ်။ GPU ကတော့ Adreno 505 ပါ။
Nokia5မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Chipset , CPU, GPU တို့ကလည်း Nokia6နဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကွာသွားမှာက Nokia3မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nokia3မှာတော့ Snapdragon မဟုတ်တော့ဘဲ Mediatek MT6737 Chipset ဖြစ်သွားပါတယ်။ CPU ကတော့ Nokia 6,5 တို့နဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ Nokia6မှာ 16MP ကင်မရာကို ကျောဘက်မှာတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Panorama, HDR အစရှိတဲ့ Feature တွေနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ Selfie ကင်မရာကတော့ 8MP ပါဝင်ပါတယ်။
Nokia5မှာတော့ 13MP ကျောဘက် ကင်မရာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အရှေ့ကင်မရာကတော့ 8 MP ပါပဲ။ Nokia3မှာတော့ အရှေ့ရော အနောက်ကင်မရာရော 8 MP ဖြစ်သွားပါတယ်။
Fingerprint ကတော့ Nokia6နဲ့ Nokia5မှာသာ ပါဝင်ပါတယ်။ Nokia3မှာတော့ Fingerprint မပါဝင်ပါဘူး။ ထူးခြားချက်တစ်ခုက Nokia6ရဲ့ Sound System မှာ Dolby Atmos sound enhancement စနစ်ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီစနစ်ကတော့ သီးချင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာ ပုံမှန်အသံထက် နှစ်ဆ ကျယ်ကျယ် နားဆင်လို့ ရသွားတဲ့စနစ်လို့ ယေဘုယျ ပြောလို့ရပါတယ်။
အတိအကျလေး သိချင်ရင်တော့ Nokia6လေး ဝယ်ကိုင်ပြီး စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Nokia5မှာတော့ သာမန် Speaker ကို Smart Amplifier နဲ့ တွဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်လည်း အသံစနစ် ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nokia3ကတော့ Single Speaker လောက်သာ အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Nokia6- Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery
Nokia5- Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery
Nokia3- Non-removable Li-Ion 2630 mAh battery
ရရှိနိုင်တဲ့ အရောင်များနဲ့ ဈေးနှုန်းများ
Nokia3ရဲ့ ဈေးနှုန်းလေးကတော့ 189,000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် အရောင်များကတော့ Silver, Black , Copper ဆိုပြီး အရောင် (၃)မျိုးထဲမှ မိမိနှစ်သက်ရာ အရောင်ကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Nokia5ကတော့ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 259,000 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် အရောင်များကတော့ Silver နဲ့ Black ဆိုပြီး အရောင် (၂)မျိုးထဲမှ မိမိနှစ်သက်ရာ အရောင်ကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Nokia6ရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ 319,000 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ အရောင်ကတော့ Black တစ်မျိုးပဲ ရနိုင်အုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကတော့ Nokia ဝယ်တော့မယ့် ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ရဲ့ Customer များအတွက် သိသင့်တာလေးတွေ လက်လှမ်းမီသလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး Nokia စမတ်ဖုန်းများ နီးစပ်ရာ လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်များမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
More in this category: « “လူသိနည်းတဲ့ Touch Screen အလုပ် လုပ်ပုံ” " Redmi Note3 နှင့် Note4ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဓါတ်ပုံအလန်းဆုံးတွေရိုက်နိုင်ဖို့ Camera setting " »